Ugbu a, Desdelinux gosipụtara gị Onye ọrụ gị, mana n'ụzọ ọzọ | Site na Linux
Ugbu a, Desdelinux na-egosi gị Onye Ọrụ Onye Ọrụ, mana n’ụzọ ọzọ
Anyị ewerewo ọrụ nke imeziwanye ụzọ nke Site na Linux na-egosi gị Onye ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ, ma ugbu a ọ dị ntakịrị ụzọ nwere ike ịbụ.
Na mbu, akara ngosi nke nkesa ọ bụla zuru ntakịrị nke ihe ndị ọzọ na isi nke saịtị ahụ. Site na imepụta ọhụụ a ọ na-aga n'ihu na-eme ya, mana ọ dị anyị ka ọ dị mma karịa. Agbanyeghị, anyị ghe oghe na ntụnye, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta imewe na-agbaso usoro saịtị ahụ, anyị ga-enwe obi ụtọ ịnata ya.
N'etiti akwụkwọ ọhụụ anyị nwere ike ịsị na anyị na-etinye akara nke Tuquito, Sabayon ma anyị wepu otu n'ime iOS ahapụ naanị logo nke Apple maka usoro ihe a na MacOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ugbu a, Desdelinux na-egosi gị Onye Ọrụ Onye Ọrụ, mana n’ụzọ ọzọ
Ihe 92 kwuru, hapụ nke gị
Ọ dị oke mma, ọ dị otu edo ma mara mma. Ekele m.
mba funka…. ha puta naani ha ??????
Kedu ihe nchọgharị ị na-eji? Olee nkesa?
M nzọ ị na-eji Chrome dị ka ihe nchọgharị gị na ... HAHA ma ọ bụrụ na otu plugin na-agwa gị elav Lol !!!
Ọ bụchaghị, ọ nwere ike ịbụ Chromium (ọ bụ ezie na ọ bụ otu ihe ahụ) ...
Ọfọn, enen banyere xfraniux, ọ naghị arụ ọrụ m na Google Chrome, ọ bụ n'ihi na m na-eji ọwa Dev-ọ dị na nsụgharị 17, echere m -? ...
Ekele, ọkọlọtọ distros dị ezigbo mma.
Ugbu a, m na windo na-arụ ọrụ m, ma n'ụlọ debian afanyekwa na chrome… .. ekele
Snif snif ... anaghịkwa m: Firefox na Debian
Ga-ahazi Firefox UserAgent iji gosipụta ọgba aghara ị na-eji, nke a bụ nkuzi ga-akọwa otu esi eme nke a site na nzọụkwụ: https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
Daalụ, aburula onye Debian !!
Hahaha nnabata na klọb .. Anyị abatala 2 😀
Maka na ịnweghị onye eji thenye ọrụ ahazi nke ọma. Lee anya n'okwu gị, n'okpuru aha aha gị na akara Firefox pụtara mana ọ bụghị nkesa ị na-eji.
Maka saịtị ahụ iji chọpụta nke ị na-eji, ị ga-agwarịrị ihe nchọgharị ahụ (Chrome na nke gị) UserAgent na Chrome ma ọ bụ Chromium:
Oh, na olee distro ị na-eji?
Ekele gị nnabata na saịtị 😉
Ana m apụ na etiti. Ọ nwere ike ịbụ nsogbu nsogbu? Enwere m 1280 × 1024 na m na-eji Aurora (firefox).
O kwere omume. Ikwesiri ime obere mgbanwe na CSS isiokwu a. Anyị ga-enwe ekele maka nseta ihuenyo 😀
Ọ bụrụ na ị nwere ike iwe nseta ihuenyo ma hapụ anyị njikọ ahụ, ka anyị hụ otu ọ si pụta ma gbalịa idozi ya 😀
Lee m na-ahapụ ya:
Ana m elekwasịkwa anya, m na-eji Kubuntu na firefox 8 ebe a (http://flic.kr/p/aPdkRF) nseta ihuenyo
Na chromiun, akara ngosi ahụ na-apụta mana emegharị n'ogologo na obosara.
Ume na peeji nke, nke ahụ bụ ihe nchọgharị dị 😉
dị njikere ọ bụ ezie na ebipụre ihe oyiyi ahụ ma ọ na-enye oghere ọcha na aka nri. 😀
Ọ bụrụ na ị nwere ike gbaa nseta ihuenyo, bulite ya ma hapụ anyị njikọ ebe a, iji hụ otu ị si ele wee hụ otu anyị nwere ike isi dozie ya.
mmm T_T ... Enwere m mmasị na ya karịa ka ọ dị na mbụ ... fuck HAHA
nke a bụ nseta ihuenyo
Oh ee ... M nwetara ya hehe, echere m na mmezi = nri ọ ga-edozi, elav Ọ maara ihe banyere weebụsaịtị karịa m na-eme, mgbe ọ bịara (echi) ọ ga-ele ya anya na ọ ga-edozi ya hehe, ekele maka Ama 😉
Egbula ihe kachasị amasị gị na mbụ. Are bu anumanu omume .. Nabata mgbanwe m na echetara gi, ibuliteghi mkpisi aka ime ihe obula, nyem akara ngosi ole na ole .. Mmetuta .. ka o si akwa ..
JAJAJAJAJAJA so anụmanụ nke kọstọm ka ọ dị? HA HA HA HA HA HA HA !!!!!
Bịanụ, kwụsị ime mkpesa ... M (site na enyemaka obere site na Alain) mere akara ngosi mgbanwe dabere na distro, yana tinyekwara njikọ ahụ na ndị dị otú ahụ ... ¬ ¬ kwụsị iwepu akwa.
Whonye wepụtara echiche iji tinye ederede ahụ na igwe nyocha? Nwoke now .. nye ya ihe onunu ka hahahaha
Ọ dakwara m, naanị m ekwughị ihe ọ bụla wee chefuo HAHA… mana enweghị ihe ọ bụla, ugbu a ị ga-asị na ị kwenyeghị m LOL !!!
Ka anyị lee ma nke m pụta… ..
Izipu site na Pardus Linux 2011.2 Cervus Elaphus + Google Chrome
Ọfọn, na nkwupụta m gara aga Chrome apụtala ma ọ bụghị Pardus, ị nweghị Pardus gụnyere na onye ọrụ gị? O___0
Ka anyị hụ ugbu a site na Pardus na Fireofx, na-anwale… ..
Ọfọn, ma, Parduseros bụ nnukwu echefuru 🙁
HAHAHA enweghị echefuru ha ... lelee ọkọlọtọ maka Pardus ebe a:
Ihe na - eme bụ ihe ndị a ... anyị (<° Linux) emeghị ka mgbakwunye nke na - etinye ihe nchọgharị na distro na nkọwa nke ndị ọrụ, ihe anyị mere bụ na ọkọlọtọ ma ọ bụ ọzọ pụtara dabere na distro onye ọrụ ahụ.
Yabụ, a ga-egosi gị ọkọlọtọ Pardus, mana ọ gaghị apụta na nkwupụta ahụ ...
Ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, n'ihi na ozugbo anyị mezuru nkọwa na ọkọlọtọ (na-eme ka ọ dị ka 100% dị mma n'agbanyeghị mkpebi nke onye ọ bụla na-agụ ya) mgbe ahụ, m ga-agbanwe ngwa mgbakwunye nke a na-ekwu, anyị ga-agbakwunye nkwado na ọtụtụ ndị ọzọ distros. , Enyochagoro m ya ma o sighi ike itughari tere aka ya (ma amaghi m ihe obula gbasara programha haha).
Na nchịkọta ... Parduseros B NOTGH been ewepu HAHA
N'ezie, gụọ ebe a:
Daalụ maka Ama, atụnyere 😉
The Sabayon logo dabara nke ọma, ọ bụ ihe nwute na ọ ghaghị ịgbanwe nkesa. Cheers
HAHA ekele, e mere ọkọlọtọ ndị a elav 😀
Na ... gịnị kpatara na ị "nwere" ịgbanwe distro?
M na-aga ezumike na achọrọ m nkesa na-anaghị achọ ọtụtụ mmelite dị ka nke m na-etinye (LMDE), n'ihi na anaghị m achọ itinye oge dị ukwuu na cafe ịntanetị, ọbụlagodi na m ga-anwa ịgbaso isiokwu gị .
A ihere mgbe ahụ 🙁
Iji gụọ isiokwu anyị ... Amaghị m, ị nwere ike ịdenye aha site na email, na ihe anyị bipụtara ga-abata site na email, mgbe ahụ na ekwentị gị mgbe ị na-elele email ahụ, ị ​​ga-enwe ihe anyị bipụtara ... n'ụzọ nkịtị na mkpịsị aka gị HAHA.
Amaghị m nke ahụ, yabụ m ga-denye aha. Daalụ maka ozi ahụ.
Onweghi ihe, ezigbo obi uto, ezigbo obi uto inyere aka 😉
Daalụ maka mmasi na ịgụ anyị 😀
Jo! Kedu ihe ị ga-agbanwe? Nwere ike ịmata ihe kpatara ya?
N'ezie, m na-aga ezumike na Sabayon chọrọ mmelite kwa izu, enweghị m ịntanetị ma achọghị m ịnọ na cafe ịntanetị na-emelite sistemụ m. Ma m ga-eso gị.
Otu obi abụọ… ọ bụrụ na ị melite Sabayon kwa izu, gịnị ga - eme?
Naanị otu ihe mere m otu mgbe na amaghị m isiokwu a, mana maka ịma atụ ọ dị ka nke a: Libreoffice 3.4.4 na nke na-esote bụ Libreoffice 3.4.4-r1 wee gabazie na mmelite niile yana emelitebeghị. , nyefee m otu ngwugwu ihe niile kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ bụ naanị pidgin ka ọ rụrụ.
Amaghị m ihe kpatara na ọ mere ... mana enwere ike ọ gaghị emelite sistemụ ahụ nwa oge, mgbe ahụ ọ na-emelite na nke ahụ dị mma, ejiri m Arch na Ubuntu mee ya n'onwe m.
N'okwu m. Hụrụ a? nnukwu ha
Kedu distro ị na-eji?
Kwesịrị ịhazi UserAgent na Opera iji gosipụta distro gị:
Ọ bụ n'ezie zuru okè site visual 🙂
Daalụ, ihe a bụ na anyị ga-edozi ihe ka ọ dị mma na ntanetị WideScreen .. 😀
mara ezigbo mma. magburu onwe ya echiche !!!
Daalụ, nke a abụghị ihe ọhụrụ ... anyị nwere otu ihe ahụ mana ọ dị iche, ugbu a naanị ihe anyị gbanwere bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ njirimara nke distro onye ọrụ 😉
Akwa! Na-akpali m! Dị nnọọ mma aka metụrụ! 😀
Ọ dị njọ na agaghị m enwe ike ịnụ ụtọ ịhụ akara ngosi Tuquito n'ihi na ebe a na-arụ ọrụ ha na-eji W $% & ## $.
N'elu hahahahaha (Dịka nkatọ na-arụ ọrụ) akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eji W &% $ # $% dị egwu 😀 ọ bụ ezigbo ụzọ iji gbaa anyị ume ka anyị jiri nwayọ n'efu 😀 hahahahaha
Hahahaha ihe Windows enweghi ebumnobi ojoo ... a Iu m iyi ¬ ¬
Ọ na-amasị m ka ọ ka mma karịa nke a, ma ọ bụghị ya, e debere ya n'elu, ya mere, ọ ka mma karịa
PS: Ọ bụ naanị m nwere azịza na-acha uhie uhie?
Ha pukwara na acha uhie uhie n’ebe m no, odi ezigbo anya 🙂
Ihe Uhie kwesiri ibido maka onye okike nke post, mana aghagam inyocha koodu 😀
Nzaghachi na-acha uhie uhie bụ na mgbe mmadụ bụ onye edemede nke otu isiokwu, ihe mmadụ kwuru na ha ga-acha uhie uhie, mana ọ ka elav nwere idozi ụfọdụ chinchi haha.
Ka anyị hụ site na Chrome na Mac OS X Snow agụ owuru
Gbalịa gbalịa …….
M masịrị otú o si anya 😀
M na-edezi css gị ma o doro anya na ị ga-edozi nsogbu a abụghị ịmeghachi ihe oyiyi ahụ ma tinye elu na aka nri, ya bụ: "anaghị emeghachi nri aka nri" mgbe itinye oyiyi ahụ.
Ka ọ ghara imegharị, enwetara m ya site n'itinye: ndabere-size: 100%
Na nke ahụ ọ dị ezigbo mma belụsọ ma enwere onye ka na-eji nyocha intaneti 8 ma ọ bụ ihe na-erughị 8 xD
ps: ahukwara m azịza ya na uhie, ma odi nma eh xD
Daalụ maka ego, elav ga-eme ufodu ule ma olile anya na edozi ya hehe.
Ma uff ... n'ezie ị ga-arụ ọrụ na% kama px ¬¬ ... lee ihe m gwara gị ...
Hahaha ekele, echere m echiche ime ihe na - eme na enweghị m WideScreen Monitor iji hụ mgbanwe 🙁
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, enwere m ike inyere gị aka dị ka onye nyocha nwalee nke ahụ, ebe m nwere ike ịnwale nke ahụ ka m na-arụ ọrụ, enweghị m otu ụdị nsogbu.
Anyị ga-enwe ekele 😀
Ọ bụ maka Jhals, ka m ghagburu
M na-ezo aka n'ụdị kọntaktị iji nwalee ihe ha na-agbanwe na saịtị ahụ, ya bụ, ịchọpụta mgbe ha mere mgbanwe ndị ahụ.
Youzọ ị hapụrụ ga-abụ ịkpọtụrụ m na ha xd, na otu ahụ m nwekwara DL.net xd
Nweghi email m? 0_0
Ọ dị mma, kwuo n'ụzọ ị ga-esi kpọtụrụ anyị ma ọ bụ ya. 😀
Ọ bụghị ntụgharị, mana ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọkọlọtọ nke mba ebe ị na-ejikọ 😀
Damn, enweghị echiche otu esi eme ya HAHAHA, Enwere m usoro ahụ ... mana itinye ya n'ọrụ ga-esiri HAHAHA ike.
Ọfọn, ị maara, ịkụda Mr. Elva, gbaghara elav iji tinye ya n'ọrụ, ee, na-enweghị ijide ya dara mbà n'obi n'ihi enweghị ike ịnọnyere obere enyi ya bụ onye mechara mepụta ihe ya nwere ọtụtụ chinchi karịa Ubuntu haha
chai amasiri m nke a kari nke mbu 😀
N’ikpeazụ, gịnị mere ihe onyogho ndị dị nso njin nchọta ihe?
Ọ bụrụ na m jiri Linux Mint (ka anyị hapụ njakịrị ọjọọ ndị ahụ n'azụ) Gịnị kpatara m ji nweta akara Ubuntu? obughi nani n'isi okwu kamakwa na nkọwa.
M na-eji Linux Mint 12 RC nwere ihe ị ga-eji ya?
Enwere m obi ike na ọdụ ahụ anaghị achọpụta m jikọtara Linux Mint Debian Edition na Firefox 8.0 (enwetara m akara ajụjụ atọ)
Agbanyeghị, saịtị dị ka nke a ma ọ dịkarịa ala, ha na-achọpụta na m na-eji Linux na Firefox 8, yana na LMDE a kapịrị ọnụ, ụdọ ndị a na-eme ka ọ pụta ìhè, ma eleghị anya ha nwere ike iji ha.
Hugo nwoke nabatara:
Ugbu a, anyị nọ n'etiti ọgba aghara. Ihe niile maka ịgbakwunye DNS nke abụọ na GoDaddy. Daalụ nke ukwuu maka n'ọnụ. Mgbe anyi putara ihe ndia, ana m agbali ya tinye ya na edemede ..
N'ebe a, ụmụ okorobịa ahụ chọrọ itinye otu ihe ahụ, mana iji PHP n'akụkụ ihe nkesa, naanị ugbu a, ha na-agabiga nsogbu dị iche iche, mana n'ezie n'oge ọ bụla ha na-edozi ihe niile 😉
Ee, enwere m ike inwe ihe ọ bụla metụtara nsogbu DNS na nkwanye m mere ha otu oge, ebe m gwara ha na ọ gaghị enye nsogbu (mgbanwe yiri nke ha mere enyeghị m ha) . Ka o sina dị, ọ ga-abụ ihe NoDaddy ime. 😉
Ndewo ụmụ okorobịa, enwere ike ịgbakwunye onye ọrụ ọrụ maka slackware? Daalụ.
Ee, anyị nwere nkwado Slackware, lee ọkọlọtọ:
Egwu. Ọ pụtaghị na m, kama mgbe m banyere blọọgụ a enwere akara ajụjụ dị ka eserese na dịka ederede «???». M na-eji SalixOS distro, dabere na slackware, na tiori ọ kwesịrị ịmata ya dị ka slack, mana o nwere ike ịchọ nhazi ma ọ bụ isi. Ekele m na azịza gị.
Ezigbo mma aesthetic zuru ezu, m hụrụ ya n'anya. Ajuju, enwere ike itinye Crunchbang (#!) Distro? Ọ ga-adị mma ka ị nwee ike ịhụ akara ngosi, n'oge a Debian pụtara (nke ọ dabere). Amaghị m ma ọ bụrụ na a ga-enwe ọtụtụ ndị ọrụ ya iji yie ndị ziri ezi na ọrụ na ọ na-egosi 🙂 ma ekele na agbanyeghị. Ekele si Buenos Aires !!
Chọpụta ee 😀
Zitere m .SVG nke logo na anyị na-eme ka ọkọlọtọ nke a distro, na anyị na-gbanwee ihe kwuru ngwa mgbakwunye nke mere na ọ na-egosi nke a 😉
Email m bụ: kzkggaara [at] desdelinux [.] Net
nwale onye ọrụ nnwale
N'ikpeazụ, gịnị kpatara ha ji wepu ọrụ a? a na m anwale
Zaghachi ka sli
Mmezi dị mkpa maka MATE na Linux Mint 12
PortalProgramas Awards (euro 1400 na onyinye)